Miyey Liverpool Haddaba Ku Guuleysatay Saxeexiisa? – Difaaca Dunidu Isku Haysato Ee Matthijs de Ligt Oo Shaciyey Inuu Doonayo Inuu Ka Garab Ciyaaro Virgil van Dijk – Latest Sports News
Miyey Liverpool Haddaba Ku Guuleysatay Saxeexiisa? – Difaaca Dunidu Isku Haysato Ee Matthijs de Ligt Oo Shaciyey Inuu Doonayo Inuu Ka Garab Ciyaaro Virgil van Dijk
Kooxda kubadda cagta Livveprool ayaa war ay ku faraxday ka heshay difaaca kooxda Ajax ee Matthijs de Ligt oo kooxaha waaeyn ee Yurub ku hirdamayaan, kaddib wacdarihii uu xili ciyaareedadii ugu dambaysay ka dhigayay garoomada.
De Ligt oo ahaa kabtankii Ajax ee ciyaartii ay Real Madrid ku xasuuqeen 4-1 garoonka Santiago Bernabeu Arbacadii, ayaa waxa la sheegay inay kooxo badan soo bandhigeen xiisaha ay u hayaan, gaar ahaan, Arsenal, Chelsea, Man United, Liverpool, Barcelona iyo Atletico Madrid.
Laacibkan oo la filayo inuu noqdo xiddiga labaad ee Ajax ka bixi doona xagaaga soo socda isla markaana uu raaci doono dariiqa saaxiibkii Frenkie de Jong oo kusii jeeda Barcelona oo ka bixisay lacag dhan €86 milyan ayaa daboolka ka qaaday inuu doonayo inuu ka garab ciyaaro laacibka ay isku waddanka yihiin ee khadka dambe uga ciyaara Liverpool ee Virgil van Dijk.
“Virgil waa ciyaartoy khibrad fiican ka helay horyaallada sare. Dabcan, waxaad u baahan tahay inaad wax ka barato, faa’iido weyn ayaana ku jirta inaad xulka qaranka ka garab ciyaarto. Way dhici kartaa (inaan kula biiro Liverpool) oo ah koox wanaagsan, laakiin hadda diiraddaydu taas maaha. Kaliya Ajax ayaan ku koobanahay, kaddib dhamaadka xili ciyaareedka ayaanan arki doonaa halka aan uga dhaqaaqi doono.” Sidaas ayuu yidhi De Ligt.
Difaacan tayada leh ayaa la filayaa inuu xagaaga ku biiri doono mid ka mid ah kooxaha waaweyn ee Yurub, waxaana la eegi doonaa naadiga ku guuleysan doona halgankiisa.